Maxaa la gudboon hoggaanka Galmudug iyo ASWJ? | KEYDMEDIA ONLINE
GURICEEL, Soomaaliya – Xaaladda magaalada Giriceel ayaa deggan, shacabkii faarujiyay ayaa billaabay in ay dib ugu soo laabtaan, biyaha iyo adeeggii korontadada ayaa la fasaxay, jidadkii xirmay ayaa la furay, maamulkii degmada ayaa dib u shaqo billaabay, nolosha guud ayaa la filayaa in ay si caadi ku soo laabato maalmo gudahood, si xarumihii ganacsiga iyo goobihii waxbarashada dib loogu howl-galiyo.
Hadaba, kadib afar maalin oo dagaal ah, barakicin ku dhawaad 200,000, oo qof oo haween iyo carruur dan-yar ah u badan, geerida in ka badan 30 ruux oo saraakiil muhiim ah ku jiraan iyo dhaawac intaas ka badan, burburinta dhaqaalaha ee labada dhinac iyo duminta magaalada, ugu danbeyn maxaa la gudboon hoggaanka Galmudug, ASWJ, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, siyaasiyiinta degaanka iyo guud ahaan ururrada bulashada?
Maamulka uu hoggaamiyo Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’, ee Galmudug, tallaabada koobaad ee laga filayo, waa in uu gurmad iyo gargaar degdeg ah gaarsiiyo dan-yarta tabaaleysan, kana shaqeeyo sidii dib loogu soo celin lahaa, dadka dhibicda roobka, dhaxanta iyo daranyada daran ay ku dilayaan duleedka magaalada.
Tallaabada labadaad, waa in Galmudug, ka shaqeyso daminta colaadda, wadahadal iyo wada-xaajood qoto-dheerna la gasho hoggaanka ASWJ, waa in dib magaalada looga saaro ciidamada ay la ciirciireyso ee laga soo daad-gureeyay Muqdisho, waana in masaaxa siyaasadda loo furo dadka ka aragtida duwan maamulka, loona ogollaado in ay si nabad ah tabashooyinkooda ku soo bandhigaan.
Tallaabada Saddexaad, waa in laga fogaado wax kasta oo sii danqinaya boogaha, isla-markaana si weyn looga fakaro go’aanka laga qaadanayo Ciidamada Qalabka Sida ee u dagaallamay ASWJ, kuwaas oo hadda qeyb ka mid ah ay ku jiraan gacanta Dowladda.
Hoggaanka kooxda diimeedka Ahlu-sunna, waxaa looga fadhiyaa, in ay joojiyaan duullaanka ay ku yihiin degaannada uu ka taliyo maamulka heshiiska lagu yahay, isla-markaana oggolaadaan jiritaanka dowlad Goboleedka Galmudug.
Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud, waxaa laga dhowrayaa in ay damacooda siyaasiga ah ku hirgaliyaan qaab nabdoon oo qri ka caagan, ka fogaadaan kala dhantaalidda CQS iyo kicinta dariiqada ugu tunka weyn dariiqooyinka diinta ee ka jira Soomaaliya, Ahlu-sunna Wal-jamaaca.
Dadka degaanku waxa ay ka doonayaan ka foojignaanta, in mar kale, damacooda siyaasiga ah uu ku daato dhiig, in ay noqdaan caqabad ku hor-gudban, hormarka nidaamka dowladnimada, taas baddelkeeda waxa ay ka filayaan in ay maamulka ku garab siiyaan la dagaallanka Kooxda Al-Shabaab.
Odayaasha dhaqanka, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo guud ahaan ururrada bulashada Galmudug, gaar ahaan Guriceel, waxaa laga sugayaa naaxinta wadahadallada, ka shaqeynta nabadda iyo hor istaagga colaadda.
Waa in ay qaadaan waddo kasta oo xal lagu heli karo, laguna abuuri karo isku soo dhawaansho iyo in dib-danbe aan dhiig ugu daadan magaalada ganacsiga ku wanaagsan, ee Galgaduud ugu dadka badan.